काठमाडौं, ३१ वैशाख । लकडाउनलाई कोरोना संक्रमणको गतिलाई सुस्त बनाउने र भाइरसको जीवनचक्र तोड्ने अचुक उपायका रुपमा हेरियो थियो । वुहानमा चीनले यही रणनीति अबलम्बन गरेको थियो । अमेरिकामा ट्रम्पले बेलामै लकडाउन नगर्दा ठूलो क्षति भएको भनेर आलोचना भएको थियो । स्थिति बिग्रँदै गएपछि निक्कै ढिलो गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लकडाउन घोषणा गरेका थिए ।
तर भारतको स्थिति भने बिल्कुल त्यस्तो हैन । भारत ‘अर्ली लकडाउन’ गर्ने देशमा पर्दछ । भारतमा मार्च २४ मा लकडाउन प्रारम्भ गरिएको थियो । पहिलो पटक २१ दिन लामो लकडाउन लगाइएको थियो । त्यस अघि १४ घण्टे जनता कर्फ्यू । अहिलेसम्म २ पटक लकडाउन थापिएको छ । जारी लकडाउन मे १७ सम्म ५४ दिन कायम रहने छ ।
त्यसपछि के होला ? फेरि लकडाउन थापिएला वा अर्को कुनै नयाँ रणनीति अबलम्बन गरिएला ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । भारतमा लकडाउन प्रारम्भ गर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या ५०० मात्र थियो । यो टिप्पणी लेखिरहँदा संक्रमितको संख्या ७४,४८० पुगेको छ । २४१५ को मृत्यु भइसकको छ । भारत उच्च कोराना संक्रमित १० देशभित्र परिसकेको छ । यो हप्ताको संक्रमण दर कायम रहेको आउँने ७२ घण्टाभित्र भारतले चीनलाई समेत उछिन्ने छ ।
लकडाउनको पहिलो २१ दिन अवधिसम्म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निक्कै उत्साहित थिए । विरोधी दलहरु पनि कुनै अर्को उपाय सिफारिस गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले सरकारलाई साथ दिन र लकडाउनको पालना गर्न जनतालाई बारम्बार आग्रह गरेका थिए । तर लकडाउनले भारतको लागि बिल्कुलै फलदायी देखिएन ।
वास्तवमा भारत सरकारको लकडाउन रणनीति पर्याप्त तयारी सहितको थिएन । त्यति धेरै जनसंख्या भएको देशमा लकडाउन अघि ३–५ दिनको पूर्व सूचना दिन जरुरी थियो ताकी मानिस उचित निवास स्थलमा पुगुन, खाना-पानीको जोगाड गर्न सकुन । तर सरकारले आकस्मिक लकडाउन गर्‍यो र जनतालाई जो जहाँ छ त्यही बस्न भन्यो ।
भारतको सामाजिक समस्या, गरिबीको स्थिति र जनसंख्या आकारले गर्दा त्यस्तो लकडाउन लागू हुन सम्भव थिएन । भारतमा ठूला शहरमा करोडौं ज्यालादारी मजदुरहरु हुन्छन । उनीहरुसंग मुश्किलले ७ दिन पुग्ने जोगाड वा बन्दोबस्त समेत हुँदैन । तसर्थ मानिसहरु जथाभावी सडकमा निस्कन बाध्य भए । हज्जारौं किलोमिटर लामो पैदाल यात्रा गर्न बाध्य आए । कयौं मानिस सडकमा भोकभोकै परे ।
यसरी जोखिपूर्ण लामो पैदलयात्रा गर्दा करिब १०० जनाको मृत्यु भयो । तर लकडाउन व्यवस्थिति भएन । अभर परेका मानिसहरुलाई सामूहिकरुपमा राख्ने र सामूहिक भोजन गराउने गरियो । त्यो लकडाउन र सामाजिक दुरीको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त तरिका थिएन ।
पछिल्लो अवस्थामा लकडाउनबाट मोदी सरकार आफै निरास हुँदै गएको छ । एकातिर आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा भएको छ अर्कोतिर संक्रमण पनि खासै नियन्त्रित भएन । अब सरकार लकडाउन विस्तारै लकडाउन खुकुलो गर्ने तयारीमा छ । सरकारले केही दिनभित्रै हवाई र रेल सेवा समेत शुरुवात गर्ने तयारी गर्न थालेको छ ।
भारतमा कोराना संक्रमणको पछिल्लो तथ्यांक निक्कै भयावह छ । एक दिनमा ११ हज्जारसम्मको संक्रमण यस बीचमा फेला परेको छ । यो दर कायम रहेका आउने १५ दिनभित्र भारत अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा हुने छ ।
मंगलबार राति मोदीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनले सम्बोधन गर्नुभन्दा अघि नै कतिपय रेलसेवाहरु सुचारु भइसकेका छन् । सम्बोधनमा उनले विशेष आर्थिक योजनाको घोषणा गरेका छन् । लकडाउनको बारे भने १८ मेपछि निर्णय लिने भनिएको छ । लकडाउन चौथो चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै मोदीले यो चरणमा लकडाउन पहिलाको जस्तो नहुने र नयाँ रुप रंगको हुने बताएका छन् ।
मोदीले आत्मनिर्भर भारत योजना अगाडि सार्दै यो महामारीको सामना गर्न आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले बितेको चार महिनामा आत्मनिर्भर हुनका लागि गरेका कामहरुको पनि चर्चा गरे । कोरोना सुरु हुँदा एउटा पनि पिपिई र एन-९५ मास्क उत्पादन नहुने भारतमा अहिले दैनिक २/२ लाखको दरले उत्पादन भइरहेको सगर्व बताए ।
मोदीको विशेष आर्थिक योजनाले त्यहाँको शेयर बजारमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारतले जोखिम बहन गरेर भने पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याईरहेको छ । ‘लकडाउन इज लकडाउन’को निर्जीव सिद्धान्तबाट टाढा रहेर लकडाउन परिमार्जन गर्ने मोदीको संकेतले कसरी मूर्तरुप पाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।